စည်သွပ်ဗူး | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
၎င်း၏အာဟာရတန်ဖိုးမြင့်မားသည်ကိုမည်သို့ကြက်ဥအမှုန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၎င်း, ဘယ်လိုသိမ်းထားဖို့, ငါ့ကိုပြောပြပါ ???
၎င်း၏အာဟာရတန်ဖိုးမြင့်မားသည်ကိုမည်သို့ကြက်ဥအမှုန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၎င်း, ဘယ်လိုသိမ်းထားဖို့, ငါ့ကိုပြောပြပါ ??? တစ်သော့ခတ်နဲ့လေဟာနယ်အထုပ်ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ကော်ဖီလိုပဲ။ တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာအဖုံးနှင့်အတူသို့မဟုတ်ဖန်အိုးတလုံး ...
အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းမြွေဟောက် !!! သူကပြောတယ်သူကပြောတယ်ဒီအေးမြသောနေရာတွင် tmnom အတွက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်, ဆောင်းတွင်းမှတဆင့်နေဖို့ပါလိမ့်မယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး 1 ကီလိုဂရမ်။ ကြက်သွန်ဖြူ 100 t ကို။ horseradish 100 t ကို။ ဆား 1-2 နာရီ။ ဌ။ ...
ဆောင်းရာသီတွင် agaric ပျားရည် marinating ၏ prompt သက်သေပြစာရွက်။
ဆောင်းရာသီတွင် agaric ပျားရည် marinating ၏ prompt သက်သေပြစာရွက်။ မှိုအဘို့အ Marinade (Nameko, ဆီ, အဖြူ, etc ... ) ရေ 1 လီတာ;2အနုပညာ။ l ။ သကြား,4နာရီ။ L. ဆား;3...
ဘယ်လိုအရသာ3litas အတွက်ချဉ်ဘေကွန်။ ဘဏ်?
၃ လီတာလီတာကိုဆားဖို့ဘယ်လောက်အရသာရှိသလဲ ဘဏ်ကိုလား ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း - အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ လေးညှင်းပွင့် / ဆား၊ ဝက်ဆီ၊
ဆောင်းတွင်းအဘို့ဆော်ရဲလ်အေးခဲဖို့ဘယ်လို? ဘယ်လိုဆောင်းတွင်းဆော်ရဲလ်များအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်: ဆော်ရဲလ်နည်းလမ်းများစွာအတွက်အချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့ပြင်ဆင်လော့။ ပထမဦးဆုံးအေးခဲနေသောဖြစ်ပါတယ်။ ဆော်ရဲလ်အေးခဲဖို့ဆေးကြောဖို့လိုပါတယ်။ Cut နှင့်တစ်ဦးအတွက်ထား ...
ယောက်ျားတွေ! လအဘယ်အရာကိုအဆင့်မှာသငျသညျအချဉ်ဂေါ်ဖီထုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်? ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ယောက်ျားတွေ! လအဘယ်အရာကိုအဆင့်မှာသငျသညျအချဉ်ဂေါ်ဖီထုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်? ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးအရှက်ကွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်! ထိုအခါငါလပေါ်ရယ်နှင့်, t ကိုဘယ်တော့မှမရှာကြဘူး။ DNM ဂေါ်ဖီထုပ် Kvasha ရန်။ အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်း nakvasila အတွက် Esze ...
အဘယ်သူသည်ပျားရည်နှင့်အတူ marinated ပူငရုတ်ကောင်း၏စာရွက်သိတယ်။ တကယ်ပဲစာရွက်လိုပါတယ်။
အဘယ်သူသည်ပျားရည်နှင့်အတူ marinated ပူငရုတ်ကောင်း၏စာရွက်သိတယ်။ တကယ်ပဲစာရွက်လိုပါတယ်။ ပူငရုတ်ကောင်းရေချိုးနှင့်မိဘို့ရေကိုပွက်ပွက်ဆူနေသောသွန်းလောင်း။ 10-15.Vodu တင်းကျပ်စွာအိုးတလုံးထဲမှာငရုတ်ကောင်းထားရှာလကာရည်သာမန်သွန်းလောင်းတွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက် ...
ငါသခွားသီးအေးခဲနိုင်ဖတ်ပါ။ မည်သူမဆိုကကြိုးစားခဲ့ကြပြီလော ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ နွေးထွေးသောပြီးနောက်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ငါသခွားသီးအေးခဲနိုင်ဖတ်ပါ။ မည်သူမဆိုကကြိုးစားခဲ့ကြပြီလော ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ နွေးထွေးသောပြီးနောက်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အဆိုပါထမင်းချက်ကဲ့သို့တူညီသော။ အမြင်တွင် appetizing မဟုတ်နှင့်အရသာတူသောရူပအတွက်အလွန်ဆင်တူသည်။ ငါပြီးသားသခွားသီးအေးခဲ ...
ဂေါ်ဖီထုပ် Kwasi pickle ဖို့ဘယ်လို?
ဂေါ်ဖီထုပ် Kwasi pickle ဖို့ဘယ်လို? ဖျက်စီး trke ပေါ်တွင်ဂေါ်ဖီထုပ်, မုန်လာဥနီပွတ်ကျွန်မသုပ် (ကြိုးစားကြရမယ်), ဂေါ်ဖီထုပ် mash သွန်း gnt ထည့်သွင်းဖို့ကစော်ဖောက်ခြင်းအဘို့အအနည်းငယ်သာသကြားထက်အနည်းငယ်ပိုငန် ...
အရသာဂျပန် Quince ကနေဘာကိုဖန်ဆင်းဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
အရသာဂျပန် Quince ကနေဘာကိုဖန်ဆင်းဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း Quince ယို 1 ကီလိုဂရမ် Quince ဂျပန်, 1,31,5, သကြား, ရေ 11,5 တစ်ဖန်ကီလိုဂရမ်။ ဝက်အတွင်းဖြတ်သစ်သီးများ (အစိတ်အပိုင်းများသို့ကြီးမားသောလျှင်), အစေ့ထုတ်သန့်ရှင်းရေး ...
နိုက်ထရိတ်နှင့်အဘယ်အရပ်ကယူကဘာလဲ? ဒါဟာ Pickled စားစရာဘို့ရှိသမျှကိုချက်ပြုတ်နည်းများတှငျဖျောပွထားခြင်းဖြစ်သည်။
နိုက်ထရိတ်နှင့်အဘယ်အရပ်ကယူကဘာလဲ? ဒါဟာ Pickled စားစရာဘို့ရှိသမျှကိုချက်ပြုတ်နည်းများတှငျဖျောပွထားခြင်းဖြစ်သည်။ နိုက်ထရိတ် (အစားအစာ) ဓါတ်အရောင် hams နှင့်ဝက်အူချောင်းနှင့်၏ပြင်ဆင်မှုအတွက် vehi စက်မှုလုပ်ငန်းမှလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ထိန်းသိမ်း ...
ခြောက်သွေ့ပန်းသီး၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကဘာတွေလဲ? အခြားသူကဘယ်သူလဲသနည်း ကျနော်တို့ကအထူးလေမှုတ်စက်ဝယ်, သူတို့ 12 နာရီခန်းခြောက်။ ဒီသာမန်ဖြစ်သနည်း
ခြောက်သွေ့ပန်းသီး၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကဘာတွေလဲ? အခြားသူကဘယ်သူလဲသနည်း ကျနော်တို့ကအထူးလေမှုတ်စက်ဝယ်, သူတို့ 12 နာရီခန်းခြောက်။ ဒီသာမန်ဖြစ်သနည်း ကျနော်တို့မီးဖိုမဟုတ် 12 နာရီမှာသူတို့ကိုအခြောက်ဒါပေမယ့်လည်း ...
အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးစပျစ်ရည်, တစ်ပါတ်သို့မဟုတ်2play သင့်တယ်
စပျစ်ဝိုင်မည်မျှကြာမည်၊ တစ်ပါတ်၊ ၂ မည်နည်းအားလုံးသည်ကြီးထွားမှု၏တောင့်တင်းမှုပေါ် မူတည်၍ နှစ်ပတ်လုံးပျော့ဖတ်နှင့်အတူ - strain သည်ပုလင်းများထဲသို့သကြားထည့်ပြီးသကြားနှင့်ဖော့ဆို့ထည့်သည်။
ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တဲ့ဖောက်တံဖွင့်လှစ်ရန်, မရှိဓါး 1 ရှိလျှင်သင်တစ်ဖန်အိုးတလုံးဖွင့်လှစ်မယ့်ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရလျှင်, သင်သုံးနိုငျ ... ကိုယ်ပိုင်တံတောင်ဆစ်။ ဟုတ်တယ်, ဟုတ်တယ်, ပဲဂရုတစိုက်ထိုသို့ပြုကြ၏။ ထားပါ ...
အနာဂတ်အသုံးပြုမှုအတွက်အဆီ pickle ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဘဏ်တွေအတွက်ပြီးတာနဲ့နှင့်စာရွက်အောက်မေ့သောသူသည်တက်လှိမ့်ချလိုက်?
အနာဂတ်အသုံးပြုမှုအတွက်အဆီ pickle ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဘဏ်တွေအတွက်ပြီးတာနဲ့နှင့်စာရွက်အောက်မေ့သောသူသည်တက်လှိမ့်ချလိုက်? အနည်းငယ်ဆားထဲမှာလှိမ့်သံဗူး၏အောက်ခြေတွင်။ သငျသညျမှနံ့သာမျိုးကို add နိုင်သည့်သို့ဆားသွန်းလောင်းရန်ပန်းကန်သို့မဟုတ်ပန်းကန် ...
အိမ်မှာကော့အသည်းရေနံပြင်ဆင်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံ? စင်ကြယ်သောအသည်းနှင့်လိုအပ်သောကြောင်းအပေါင်းတို့၏သန့်ရှင်းတဲ့ဆေးကြောပြီးတော့ကြမ်းပြင်ကို ယူ. , Polotenchik ပေါ်တွင်တင်နှင့်ရေဖယ်ရှားပစ်ရရန်နောက်ထပ်နှင့်ဖုံးလွှမ်း ...
စနစ်တကျအိမ်မှာဆော်လမွန်ငါးဆားနယ်ကိုဘယ်လို? အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုရောနှောဆီသံလွင်သို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အတူဆော်လမွန်ပြန့်ပွား၏ပြီးဆုံးအပိုင်းပိုင်း (ကအဆီသွားပြီလျှော့ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်) အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသကြားနှင့်ဆား ...
sauerkraut ဖျော်ရည်ကဘာကြောင့်“ snotty” ဖြစ်တာလဲ။ ငါပြင်နိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ဂေါ်ဖီထုပ်ကိုလွှင့်ပစ်နိုင်ပြီလား။
sauerkraut ဖျော်ရည်ကဘာကြောင့်“ snotty” ဖြစ်တာလဲ။ ငါပြင်နိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ဂေါ်ဖီထုပ်ကိုလွှင့်ပစ်နိုင်ပြီလား။ အဘယ်ကြောင့်လွှင့်ပစ်? သငျသညျ yummy ကနေ hodgepodge ကြော်နိုင်ပါတယ်! ကောင်းပြီ၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊
ငါ့ကိုအစိမ်းရောင်ခရမ်းချဉ်သီး pickling များအတွက်အကောင်းဆုံးစာရွက်ပြောပြပါ။
ငါ့ကိုအစိမ်းရောင်ခရမ်းချဉ်သီး pickling များအတွက်အကောင်းဆုံးစာရွက်ပြောပြပါ။ ကိုယ့်ကဤခရမ်းချဉ်သီးကိုချစ်။ 10 အကြောင်းအစိမ်းရောင်ခရမ်းချဉ်သီး-ကြက်သွန်ဖြူ-အကြီးအကဲများ parsley marinade-ရန်၏ 102ကြီးမားသောအစုအဝေးကိုကီလိုဂရမ်: 5-250 ရှာလကာရည်၏ဂရမ် 2-1 ခွက်ကိုသကြားဖန် liters ...
မည်သူမဆိုလေဟာနယ်အဖုံးကြိုးစားခဲ့ကြပြီလော ဒါ့အပြင်ကြော်ငြာပေါ်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ပိုက်ဆံပစ်ချနေပါသည်! ရေခဲသေတ္တာတွင်ဤအဖုံးကိုတစ်ကြိမ်ဖွင့်လှစ်။ ဒါပေမယ့်အခန်းထဲမှာမပိုတစ်ခုထက်ဝက်ထက်တစ်နာရီ၌တည်၏။ ထိုသို့အဖုံးကဲ့သို့သောအထည်နှင့်အတူအိုးတလုံးရဲ့ ... ။
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,390 စက္ကန့်ကျော် Generate ။